Photos: Chan Chan's Second Solo Album Promotion Event | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Photos: Chan Chan's Second Solo Album Promotion Event
Here are photos of Myanmar Popular Singer Chan Chan's Second Solo Album, titled "Thate Chit Tae, A Yann Mone Tae", promotion event which was held on 20 November 2011 at Kan Daw Gyi Park, Yangon. There are altogether 12 Songs in this Album which are composed by Myint Moe Aung, Shwe Jor Jor, Chan Chan and Ja Mann Mahogany. Lazy Club Band plays music for the whole album.
နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့က ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ချမ်းချမ်း ရဲ့ ဒုတိယမြောက် Solo Album "သိပ်ချစ်တယ် .. အရမ်းမုန်းတယ်" တေးစီးရီး မိတ်ဆက်ပွဲ
Myanmar Popular Singer, Chan Chan
Nay Soe LatNovember 22, 2011 at 6:00 PMall good!ReplyDeleteminNovember 23, 2011 at 5:45 AMချမ်းချမ်း ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ပရိတ်သတ်က ကုလားတွေချည်းပါပဲလား....ReplyDeletemgmgtinNovember 26, 2011 at 7:50 PMmay lo 111 min mame ko do ma ti bu min ko lee bay min ti yin pyaw bar lar ko may ko lo 111 lee bay do lo ma tarrrrrrrrr phyowai min kwwwwwatutu bayReplyDeletemgmgtinNovember 26, 2011 at 7:53 PMchancahn ka min amay lar maylo <111 @ phwia>ReplyDelete111November 27, 2011 at 6:06 PMမင်းကဘာလာရှုပ်တာလဲငါပြောတာမှန်နေလို့နာတာလားဟဟဟဟဟReplyDeleteမြင်စိုင်းသားNovember 29, 2011 at 4:33 AMlaysu ရေ....ရွှေတီလုပ်(တရုပ်)ကြီးပေါက်ဖော်ကိုရောဘယ်လိုဘဘောထားလဲခင်ဗျာ...တိုင်းရင်းသား..တရုပ်ပေါ့နော်..ဟားဟားReplyDelete007November 30, 2011 at 12:35 AMyote htue ma hote par bu.ta kal kyint kyan arr htoke khe te ta kal shi khe te myat swar pha yar ko lay sar kyi nyo teanay ne yote pwar taw pyu lote koe kwel tar par...ReplyDeleteမြင်စိုင်းသားNovember 30, 2011 at 3:41 AMphyowai71 လေးလည်း ...အားရင်..မြင်စိုင်းသားဆီ..လာခဲ့ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်....စာတွေသင်ပေးမယ်...အသိဥာဏ်တွေပွင့်လာအောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့....မုန်းတီးနေတာတွေပျောက်သွားအောင်ပေါ့...လိပ်စာလိုချင်ရင်ပေးမှာပေါ့နော်....ReplyDeletebad girlDecember 4, 2011 at 8:02 AMချမ်းချမ်းpostလေးအကြောင်းပြုပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို စော်ကားသော အပယ်ကို လားမယ်. ငရဲသားများပေါ်ပေါက်လာပါကြောင်း .......ReplyDeleteသံလျင်သားDecember 4, 2011 at 10:20 AMကိုယ်ကြိုက်လို့အားပေးတာ ကိုယ်ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်လဲဆိုတာကြေညာရမှာလားမွတ်စလင်တွေဘယ်ပွဲမှမကြည့်ရတော့ဘူလားဟင်ReplyDeleteAdd commentLoad more...